အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - ခရစ်တော်၏ဘုရားကျောင်း
ယေရမိက 29: 11 ဆက်ဖတ်ရန်
စပါးရိတ်ရာကာလ အမှန်တကယ်သည်ကြီး သခင်ဘုရားသည်သူ၏ဝန်ဆောင်မှုသို့သင်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်များအတွက်အားပေးအားမြှောက်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ undenominational ဖြစ်ကြသည်နှင့်မျှမတို့ဗဟိုဌာနချုပ်သို့မဟုတ်သမ္မတရှိသည်။ အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းယေရှုခရစ်တော်၏ (1-22 ဧဖက် 23) ထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏တစ်ဦးချင်းစီအသငျးတျောကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်ပြီး, သူကတစ်ဦးကယုံကြည်ခြင်းက (ဧဖက် 4: 3-6) သို့ကျွန်တော်တို့ကိုမှီဝဲသောဘုရားသခငျ၏တရားစကားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်သူ၏အဘို့သန့်ရှင်းသောတမန်တော်များ၏သွန်သင်ချက်များနှင့်လူမ၏သွန်သင်လိုက်နာပါ။ ကျနော်တို့သာခရစ်ယာန်များအများမှာ!
A မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် Inspiration ၏မက်ဆေ့ခ်ျကို
tab ကို 1
tab ကို 2
tab ကို 3
သငျသညျ Are ရှာဖွေနေ အသစ်တခုအဘို့ ဘုရားကျောင်းမိသားစု လေ့လာသင်ယူနှင့်အတူကိုးကှယျသလော ကျနော်တို့မှချစ်ကြလိမ့်မည် ပိုမိုသိ သင်နှင့်သင့်မိသားစုအကြောင်းကို။ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များသင်ကြိုဆိုပါတယ်။
ကိုလိုက်ရှာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် တရားဟောချက်? Listen သို့မဟုတ် download, တစ်ဦးမိတ္တူယနေ့။ access ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ တရားဒေသနာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတရားဟောဆရာတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့။
ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ ကိုးကှယျခွငျးအဘို့ဤတနင်္ဂနွေ, ငါတို့မှာရှိတယ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသင်းတော်ထောင်ပေါင်းများစွာ သင့်ရဲ့အဆင်ပြေသည်။ သငျသညျအနီးရှိဘုရားကျောင်းကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်း directory များသွားရောက်ကြည့်ရှု။
ကမျြးစာကိုပြောတတ်ဘယ်မှာကျနော်တို့ပြောနှင့်သမ္မာကျမ်းစာအသံတိတ်ရှိရာကျွန်တော်အသံတိတ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ undenominational ဖြစ်ကြသည်နှင့်မျှမတို့ဗဟိုဌာနချုပ်သို့မဟုတ်သမ္မတပြီ.
အကြောင်းပို Read ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ
အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းယေရှုခရစ်သည်ကိုယ်တော်တိုင် (1-22 ဧဖက် 23) ထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်ပါတယ်။
We ကိုးကှယျခွငျးသညျဘုရားသခငျ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တရားနှင့်သစ္စာတရားကိုအတွက်
သီချင်းဆို: ကျနော်တို့တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသီချင်းခေါင်းဆောင်များကဦးဆောင်အတူတကွအများအပြားသီချင်းများနှင့်ဓမ္မသီချင်းနာသီချင်းဆိုပါမည်။ ဤရွေ့ကား (တူရိယာများ၏ပူးတှဲမပါဘဲ) တစ်ဦး capella သီဆိုလိမ့်မည်။
7,000 ကျော်ကျွန်းများနှင့် 104 သန်း၏ကြီးထွားလာသောလူဦးရေနှင့်အတူ, ဖိလစ်ပိုင်အာရှအဓိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်မဟာဗျူဟာတံခါးပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအထဲက Find ပါဝင်ရယူပါ
အတော်များများကဖိလစ်ပိုင်တရုတ်, အခြားအာရှလူမျိုးနှင့်သူတို့သြဇာရာထူးရှိသည်ဘယ်မှာပင်အရှေ့ပိုင်းအလယ်နိုင်ငံတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါနေရောင်ခြည် Player ကိုများအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍနှင့်အချိန်။
သခင်ဘုရား၏ဘုရားကျောင်းယခင်နှင့်လက်ရှိမစ်ရှင်အားထုတ်မှုကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဖိလစ်ပိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ခန့်မှန်းခြေ 800 အသငျးတျောမြားရှိပါတယ်.
ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသခင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းငှါကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အစေခံရန်နှင့်သခင်နှင့်သင်၏လမ်းလျှောက်၌သင်တို့ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာခရစ်တော်၏ဘုရားကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲဘုရားသခင်၏မိသားစုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အပျော်အပါးဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျမဆိုဝန်ဆောင်မှု၏ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုပါကဖုန်းဆက်ပါသို့မဟုတ်ရေးသားဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ။
"ခရစ်တော်၏အသင်းတော်ငါ့မိသားစုနှင့်ငါရှာနေနှင့်လိုအပ်ခဲ့သည်ကိုအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားဝေမျှဘို့အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခငျသညျကောငျး၏! "
Silbano Garcia က, II ကို။ ဧဝံဂေလိဆရာ
Silbano Garcia က, II ကို။ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များတစ်ခုဧဝံဂေလိဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, နှင့်အင်တာနက်ဝန်ကြီးဌာနများ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကို Garcia ကကယ်လီဖိုးနီးယား, ကော်လိုရာဒို, ဖလော်ရီဒါ, အိုင်ဒါဟို, အိုင်အိုဝါ, နယူးယောက်, နှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်သာသနာပြုအလုပ်ကိုပြုတော်မူပြီ။ ထို့ပြင်ကမ္ဘာအနှံ့ဧဝံဂေလိတရားကိုအစည်းအဝေးများ၌ဟောပြောခဲ့သည်။ မေလ 1, 1995 တွင်သူ www.church-of-Christ.org မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များများအတွက်ပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကို Gateway မှာစေလွှတ်အတွက်နျဆာပခဲ့သည်။ ဒီအွန်လိုင်းဝန်ကြီးဌာနကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအဘို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိတဲ့အချက်အချာအဖြစ်အစေခံနေဆဲဖြစ်သည်။
အစ်ကို Garcia ကအင်တာနက်ကိုဧဝံဂေလိ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးသည်အင်တာနက်ဧဝံဂေလိရှေ့ဆောင်အဖြစ်လူသိများသည်။ သူသညျယရှေုခရစျ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပြန့်ပွားများအတွက်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. အသင်းတော်ရာပေါင်းများစွာကူညီထဲမှာဆာပဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအအွန်လိုင်းအားထုတ်မှုဟာလောကကမ္ဘာကြီးအပါအဝင်အားလုံးအဓိကဂိုဏ်းအုပ်စုများကသတိပြုမိခဲ့ကြသည်။